Ihe niile gbasara egbe - Ikkaro
Edemede, vidiyo, njikọ na akụrụngwa dị iche iche dị iche iche na ojiji ha.
Static, acrobatic, traction egbe, KAP, wdg.
Akụkọ banyere egbe
Agbanyeghi na amamịghe ha amaghi, ekwesiri ka amuru ndi China na ihe kariri puku abuo na nari ise gara aga. E nwere ọtụtụ akụkọ mgbe ochie gbasara mmalite ya: okpu bamboo nke onye ọrụ ugbo nke ikuku na-ebu, ụgbọ mmiri nke ụgbọ mmiri ma ọ bụ ikekwe ọrụ nke ọkà ihe ọmụma Mo Ti, onye wuru egbe dị ka nnụnụ nke fere ụbọchị atọ dị ka nnụnụ
Eziokwu bụ na egbe na-efe efe bụ ọrụ ntụgharị uche maka ndị China. Ma, na mgbakwunye na ntụrụndụ ndị a ma ọ bụ nke okpukpe a, e jiri kites mee ihe - dịka ha ga-eme na Polynesia ọtụtụ afọ mgbe nke ahụ gasịrị - dị ka ihe eji akụ azụ, na-ejikọ nko na nsị na egbe nke mechara si n'ụgbọ mmiri pụta, na-akpachara anya itinye. ngwaọrụ dị na anya zuru oke site na ndò nke ụgbọ mmiri na-eduhie azụ.
Ndị China chọpụtakwara ngwa agha maka ihe a, nke nwere ike ịbụ site na nrịba ama n'ọgbọ agha ahụ, na ịlele ebe dịpụrụ adịpụ maka ogige ndị agha nọchibidoro na ọbụlagodi ụfọdụ akụkọ kwuru na e nwere ụmụ nwoke ndị feere na ihe ndị a karịa obodo ndị gbara ya gburugburu.
Egbe na-agbatị site na China n'akụkụ niile nke mmetụta ya; otu a, ọ pụtara na mba ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia dịka Korea, Malay Archipelago, Indonesia na Burma, na Japan na India. Amaghi mgbe mgbasa a malitere, mana ọ bụrụ na o yikarịrị ka ọ ga-eme n'oge dị mkpirikpi, ka egbe ahụ malitere ịgbasa na Polynesia, wee bụrụ nke a maara dị ka ọwụwa anyanwụ dị ka Easter Island. N'otu aka ahụ, site na India, ọ gbasapụrụ n'ebe ọdịda anyanwụ ruo na Arabian Peninsula na North Africa.
Na Europe, ama ama tupu narị afọ nke XNUMX na ụzọ atọ: mwakpo Mongol, ụzọ azụmahịa si Cape of Good Hope na kọntaktị na mba Arab. Akụkọ ihe mere eme nke Europe nke egbe malitere site na ndị a na-akpọ Dracos ma ọ bụ ndị na-ekpuchi ifufe nke a na-eji dragon bụ ndị ejiri dị ka ọkọlọtọ na ụbọchị ikpeazụ nke Alaeze Ukwu Rom. Ihe ndị a bụ akpa a na-eme ọnụ, nke nwere ọdịdị nke dragọn ma ọ bụ anụmanụ ọzọ dị egwu ma kegide ya n'elu osisi. Ka ọ na-ekupụ ikuku, ọ na-efe, na-efegharị n’elu ịnyịnya n’elu ndị agha. Ebumnuche ya bụ ime ka onye iro na-atụ ụjọ n'agha ma na-eme dị ka olu olu ma ọ bụ ihe na-eme ka ndị na-agba ụta mara ụzọ ikuku.
N'ihe dị ka narị afọ nke iri na anọ, nkọwa zuru ezu banyere egbe yiri nke dragọn pụtara n'ọtụtụ akwụkwọ nke oge ahụ, dị ka akwụkwọ Conrad Kieser dere na teknụzụ ndị agha Bellefortis (1405) ma ọ bụ na ihe odide 1430 echekwara na Vienna. Mana ọ bụ na ngwụcha narị afọ nke iri na asaa mgbe egbe ahụ ghọrọ nke ewu ewu na Europe niile, agbanyeghị na ọ bụ naanị ụmụaka, dị ka ihe omume ntụrụndụ ma ọ bụ na ihe ngosi pyrotechnic. Amabeghị ikike sayensị ya ruo na narị afọ nke iri na asatọ, ewezuga ụfọdụ nyocha edere na Isaac Newton na akụkụ geometric nke ụdị egbe. Onye ọkà mmụta sayensị ọzọ nke ji nnwale mee ihe bụ Benjamin Franklin bụ onye, ​​otu ụbọchị ajọ ifufe na June 1752, na-eji ọkụ eletrik ele ule. Mgbe o buliri "igwe egbe" ya a ma ama na elu igwe nwere igodo jikọtara eriri ahụ, ọ chọpụtara na arụpụtara eletrik, nke mere ka o nwee ike igosipụta ụdị àmụmà ma mechaa mepụta igwe àmụmà.
N'agbanyeghi usoro ndi a, ebughi iji ogbe mgbe nile iji bulie ihe ndi ozo banyere ihe banyere ihu igwe rue oge 1891th. Ihe mepụtara William A. Eddy (1894) na L. Hargrave (XNUMX) bidoro n’oge a, nke butere mgbanwe na ojiji nke ha n’ịmụ banyere ikuku. Nke mbu mere egbe di egwu na eriri nwere udidi ka o wee meputa uzo dihedral, nke mere ka o fee n’enweghi odu; ube nke abụọ bụ akụkụ akụkụ atọ nwere igbe abụọ jikọtara onwe ha na oghere mepere emepe.
Na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu na mmalite narị afọ nke iri abụọ, dabara na mmepe nke ụgbọelu, e mepụtara usoro maka ebumnuche ndị agha iji bulie ndị na-ekiri ihe na-eme n'ọgbọ agha. Ndị a nwere ụgbọ oloko buru ibu nke a tụgidere nkata, site na egbe ma ọ bụ eriri ya, iji debe onye na-ekiri ya. Ha nwere ihe ịga nke ọma ma ọ bụ na-erughị, mana na njedebe balọn ahụ na-arụ ọrụ nke ọma. Usoro o yikarịrị ka ọ ga - abụ, nke ndị agha Britain na Army nabatara, bụ nke ji egbe nke onye ọsụ ụzọ ụgbọelu bụ Samuel Franklin Cody (1903) chepụtara, nke nwere mkpụrụ ndụ Hargrave abụọ nwere njikọta na ibe ha ma nye nku nkuku.
N’ime afọ iri mbụ nke narị afọ nke 1907, Alexander Graham Bell ji kites mee nyocha iji mepụta igwe na-efe efe nke nwere ike ịhazi mmadụ. O wuru nnukwu comets mejupụtara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mkpụrụ ndụ tetrahedral. Na 3.393, o wuru otu n’ime sel 50 nke dọkpụrụ ụgbọ mmiri na-adọkpụ gbagoro mita 1909 n’elu ala. Ihe owuwu tetrahedral ndị ọzọ buru ibu karị, nke nwere moto, enyeghị ihe achọrọ, yabụ na XNUMX, ọ họọrọ ịrara onwe ya nye na ọrụ ndị ọzọ.
Mgbe Agha IIwa nke Abụọ gasịrị, onye injinia America bụ Francis Rogallo mepụtara egbe nke meghere ụzọ maka ụdị ọhụrụ a maara dị ka ọkara mgbanwe, nke e ji nweta ụdị ya site na njikọta nke ọrụ nke ifufe na sistemụ flange isii. Ndị NASA nwere mmasị na echiche Rogallo, nke ọ mere atụmatụ iji dị ka parachute na nloghachi nke capsules oghere. Ndị na - agba ọsọ ugbu a na akara abụọ nwere akara abụọ bụ nyocha abụọ a.
Na 1963, onye American Domina C. Jalbert sitere n'ike nke nku nke ụgbọ elu ya mepụta egbe na-agbanwe agbanwe (parafoil) nke nwere uru niile nke ụkpụrụ ikuku na-agbanwe agbanwe, ebe ọ bụ na egbe ahụ achọghị mkpanaka ọ bụla, wee mezuo ya Ọdịdị na nkwụsi ike nke ụgbọ elu site na akpa dị n'ime ikuku nke ikuku na-ejupụta, nke nyere ya nku nku nke nnukwu nkwụsi ike na ike dị elu.
N'oge a, ọdịdị nke kite abụọ, atọ na nke anọ na kịtịkpa emeela ka ọ bụrụ egwuregwu na egwuregwu.
Otu esi eme ulo eji eme ulo
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka oru ngo mee na ngwụsị izu a. Anyị achọpụtala usoro vidio 5 na ha na-akowa uzo ozo n'uzo zuru ezu otu esi eme egbe
Ọ bụ ebumpụta ụwa nke nwere akụkụ nwere akụkụ atọ, yana iji wuo ya, anyị ga-eji ahịhịa ọka maka ihe owuwu ahụ na akwụkwọ anụ ahụ.
Anyị na-amalite na ihe ndi di nkpa ime egbe.
Otu esi eme efere plastik
Ista na-eru nso dị ka ọdịnala ụmụaka niile, ọ bụghị ya mere ụmụaka ga-eji fee otu ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme uzo eji eme ulo
Izu Nsọ agafeela, oge egbe bụ eze nwanyị na-enweghị mgbagha na ebe ndị nne na nna ya na-elekọta ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Bumblebee - Pamụaka Akwụkwọ Egbe
Anyị ga-egosi otu wuo akwukwo di mfe, magburu onwe ya maka ụmụntakịrị ime, ma n'ụlọ ma ọ bụ na ogbako.
Ọ bụ maka bumblebee egbe kere site Naịl Velez
Egbe bụ mpempe akwụkwọ A3 nke ejiri okpukpu abụọ, nke gbagọrọ agbagọ na eri ịkwa akwa na-agbakwunye ma dị njikere ofufe.
Ya mere, ọ dị mma, ịnwe akara ebe ọ dị mkpa ka ọ dị, ịnye ụmụaka mpempe akwụkwọ ka ha wee see eserese na mgbe ha mechara zọọ ya ma kpọọ ya.
Mkpụrụ Decathlon 185
Ọ bụrụ n’ị na-agụ nke a ọ ga-abụrịrị n ’izụta otu. Ọ dị m nwute. I mehiere dika m, mana ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Ihe dị iche n’etiti ikuku na ikuku
Ọtụtụ mgbe anyị na-ekwu maka ikuku na ikuku ikuku, dị ka a ga-asị na ha bụ otu. Ma nke a abụghị otú… Nọgidenụ na-agụ ihe